News - Injineerinka warshad isku dhafan ee baaxada weyn ee horumarka cagaaran caqli badan warshada warshadeynta isku dhafka iibka tooska ah
Injineerinka warshad isku-dhafan ee baaxad weyn oo cagaaran caqli badan oo isku dhafan warshad warshad iib toos ah
Jihada cusub ee caqliga iyo horumarka cagaaran ee injineernimada qalabka warshad qodan ballaaran. Iyadoo wajahaysa isbeddelada degdegga ah ee xaaladda hadda jirta, warshadda isku-dhafka ballaaran ee injineernimada ayaa sidoo kale wajaheysa dib-u-habeyn u dhiganta. Maalmahan, iyada oo la dardargelinayo dhismaha magaalooyinka iyo miyiga, baahida loo qabo mashiinnada shubka ayaa sidoo kale kordhay. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qalab shub ah oo aan dhammaad lahayn oo yaalla suuqa, oo tayadoodu xitaa aan dheelitirnayn. Waxyaabahaas ka mid ah, waxaa jira alaabooyin qaarkood oo leh heer gaar ah oo otomaatig ah, saxnaanta miisaaman oo sarreeya, tayada saldhigga isku dhafka wanaagsan, iyo maalgashi hooseeya. Laakiin isla mar ahaantaana, waxaa sidoo kale jira qaar soo saareyaal ah oo soo jiita iibsadayaasha qiimo jaban, iyo xuduudaha farsamo ee qalabka waxay ku sii jireen heerka dhaqanka.
Marka hore, marka la eego saxnaanta qalabka. Saxsanaanta qalabka dhirta isku dhafan ee baaxada weyn ayaa inta badan ka muuqda afarta dhinac ee isu geynta, sibidhka, shaybaarka iyo biyaha. Isugeynta, saxsanaanta guud ahaan waxaa lagu kontoroolaa qiyaastii 2%, sibidhkuna waa qiyaastii 1%, isu-geynta guud ahaan qiyaastii waa 1%, saxsanaantuna waa 1%. Isugeynta, isu-dheellitirka miisaanka iyo miisaanka suunka ayaa badanaa loo isticmaalaa miisaan. Miisaanka suumanka badanaa waa miisaanka isugeynta, iyo miisaanka miisaanka ayaa loo qaybiyaa isugeyn iyo culeys shaqsiyeed. Miisaanka sibidhka iyo budo kale ayaa sidoo kale loo qaybiyaa laba qaab: miisaanka qofka iyo isugeynta. Waxyaabaha lagu daro waxaa loo qaybiyaa seddex qaab oo cabbiraad ah: qiyaasta miisaanka, cufka, iyo garaaca wadnaha marka loo eego waxyaabaha lagu daro. Biyaha, sidoo kale waxaa loo qaybiyaa 2 hab oo qiyaas ah, kuwaas oo kala ah miisaan iyo culeys. Hubinta saxnaanta alaabta ceeriin ayaa fure u ah soo saarida shub ganacsi tayo sare leh. Haddii saxsanaanta qalabka la hagaajiyo, qalabka shaki la'aan wuu ka awood badnaan doonaa.
Marka labaad, dhirta isku dhafan ee waaweyn, ujeedada ugu weyn ayaa ah in la soo saaro shub ganacsi tayo sare leh. Sidaa darteed, xulashada alaabta ceeriin ah ayaa waliba si gaar ah muhiim u ah. Shuruudaha sii kordhaya ee sii kordhaya ee qalabka cagaaran, xulashada qalabka ceeriin ee qalabka ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay. Marka laga hadlayo waxyaabaha lagu daro, haraaga qashinka adag ee warshadaha sida dambaska dhoobada, slag, slag biyaha, iyo kalsiyum carbide slag waa in loo isticmaalaa in lagu badalo isticmaalka wax soo saarka ee makiinadaha budada ah ee khaaska ah. Marka labaad, marka la eego isku-darka, warshadaha la xiriira sidoo kale dib ayaa loo isticmaali karaa si looga faa'iideysto kheyraadka loona gaaro ujeedka ilaalinta kheyraadka.
Intaas waxaa sii dheer, xakamaynta qalabka dhirta waaweyn ee isku dhafan waa in dib-u-habeyn lagu sameeyaa si loo gaaro sirdoon dhameystiran oo markaa lagu xoreeyo shaqaalaha. Iyadoo la horumarinayo xilliyada, qalab si otomaatig ah oo otomaatig ah u lama huraan ah. Haddii aad rabto inaad boos ka sii haysato warshadaha mashiinada la taaban karo, dadnimo iyo sirdoonka nidaamka xakamaynta waa lama huraan.
Nidaamka Qiyaasta Wadarta Wadarta, Isugeynta Nidaamka Dufcadda, Automatic Wadar Dufcaddii Bacriminta fiicni, Qaybo ka Mashiinka Mashiinka la taaban karo, Mashiinka Dufcaanta Isugeynta, Nidaamka isugeynta wadarta otomaatiga ah,